घरभित्रका कोठामा वाल पेपर लगाउँदा कति हुन्छ खर्च ?
टिकाउ बनाउन तीन पक्षमा दिनुस् ध्यान
काठमाडौं । भर्खर घर बनाउनुभएको छ वा घरको रुममा कलरको विकल्पबारे हुन सक्छ भनी सोच्नुभएको छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईंको रोजाइमा वालपेपर पनि पर्न सक्छ ।
घरलाई बाहिरबाट सुन्दर बनाउन विभिन्न उपाय अपनाइएजस्तै घरभित्र तथा बेड रुमलाई पनि उत्कृष्ट सजावट गरेर आकर्षक बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने पछिल्लो समय विभिन्न खाले वाल पेपर बजारबाट खरिद गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
लामो समयसम्म टिकाउ हुने र आफ्नो इच्छाअनुसार रुमलाई ‘गुड लुक्स’ दिन सकिने हुँदा विकल्पमा वालपेपर पर्न सक्छन् । एभ्रीघर प्रालिका अध्यक्ष राजेश ढकाल पछिल्लो समय वाल पेपरको माग र आकर्षण बढ्दो रहेको बताउँछन् । पुरानो भित्तामा लगाउन सकिने भए पनि उपयुक्त समय भनेको घरको काम सकिएसँगै पुटिङ गरिएका भित्तामा वाल पेपर लगाउँदा सहज हुने उनको सुझाव छ ।
‘दुई–तीन पक्षका कारण यसका प्रयोगकर्ता सन्तुष्ट भएको पाइन्छ’, ढकालले भने, ‘एउटा रंग (कलर) लगाउने भित्तामा वाल पेपर लगाए त्यसको बुट्टा, बनावट राम्रो हुन्छ भने अर्काे उपभोक्ता रोजाइअनुसारका बुट्टा तथा डिजाइन पाइन्छन् भने कतिपय अवस्थामा रंग लगाउनेभन्दा पनि सस्तो र उस्तैउस्तै लागत पर्न आउँछ ।’
कतिपय अवस्थामा रंगभन्दा सस्तो पर्ने उनी बताउँछन् । रंगको गुणस्तरअनुसार मूल्य बढी हुन्छ तर सोहीअनुसार रंगभन्दा वाल पेपर बढी लाभदायी देखिने उनको दाबी छ । वाल पेपर लगाउन धेरै समय लाग्दैन भने फोहोर पनि हुँदैन । एक–दुई घन्टामै लगाउन सकिने, केमिकलबाट पनि बच्ने हुनाले लाभदायी रहेको ढकालको तर्क छ ।
यसको मुख्य फाइदा भनेकै रुमको ब्युटिफिकेसन हो । वाल पेपर दुई साइजमा बजारमा पाइने गरेको छ । तपार्इंलाई कुन र कति आवश्यकता हो, सोहीअनुसार खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । सानो साइज अर्थात् एक रोल, जसले ५७ स्क्वायर फिटलाई कभर गर्छ भने यसको मूल्य दुई हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । १७७ स्क्वायर फिट वाललाई कभर गर्ने ठूलो साइजको रोलको मूल्य भने बजारमा आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ पर्छ ।
घर निर्माणपछि भित्रपट्टिका भित्तामा वालपुटिङ गरेपछि आफ्नो इच्छा र डिजाइनअनुसारका वाल पेपर लगाउन सकिन्छ । चिल्लो पारेको भित्तामा एक किसिमको केमिकल लगाएपछि उक्त वाल पेपर लगाउन सकिन्छ । यो १० वर्षसम्म ग्यारेन्टी हुनुका साथै टिकाउ पनि रहेको ढकाल बताउँछन् ।
तर, वाल पेपर धारिलो चक्कु वा अन्य कुराबाट काट्नु वा कोर्नुहुँदैन । पानी चुहिने भित्तामा यो टिक्दैन र लगाउनुहुँदैन भने धेरै घाम पर्नेमा वाल पेपर लगाउँदा डिस कलर हुने सम्भावना रहन्छ । यी पक्षमा ध्यान दिन सके वाल पेपर टिकाउ र राम्रो हुन्छ । यी वाल पेपर भने चीनबाटै ल्याउने गरिन्छ । युरोपबाट ल्याइने अधिक महँगो हुने यसका बिक्रेता बताउँछन् । यसको गुणस्तरअनुसार मूल्यमा पनि फरक–फरक हुन्छ ।